ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂါရ၀ပြုစဉ်
Thursday, November 25, 2010 2:33 AM | Posted by Unknown
1:51 AM | Posted by Unknown
8:17 AM | Posted by Unknown
5:29 AM | Posted by Unknown
CNN: Suu Kyi has long-awaited reunion with son in Myanmar
November 23, 2010 -- Updated 0349 GMT (1149 HKT)
Aung San Suu Kyi holds the hand of her younger son Kim Aris after his arrival at Yangon airport on November 23, 2010
Credit to CNN: http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/22/myanmar.suu.kyi/index.html
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင် ရိုက်မည်
9:49 AM | Posted by Unknown
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရာမှာ မလေးရှားဖွား ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင် မစ်ရှဲ ယိုးက ဒေါ်စုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပါမယ်တဲ့။ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် ဘာမှတော့ မသိရသေးပါဘူး။ သတင်းအသေးစိတ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ကြည့်ပါ။
Best For Film is inordinately excited to bring you what we believe to beaworld exclusive; BAFTA-nominated Malaysian actress Michelle Yeoh is to star inaforthcoming biopic of Burmese pro-democracy leader and Nobel laureate Aung San Suu Kyi.
No official information has been released on the film, but our mole tells us that it will focus on Aung San Suu Kyi’s personal experiences rather than be explicitly political.
That’s all we’ve got for now, but to be fair it’s more than anyone else. More on this exciting story as it develops…
EDIT: The biopic is apparently being made by the BBC. We call Benedict Cumberbatch to cameo as General Ne Win!
Credit to Best for film: http://bestforfilm.com/film-news/michelle-yeoh-to-star-in-aung-san-suu-kyi-biopic/
7:31 AM | Posted by Unknown
7:24 AM | Posted by Unknown
အချပ်ပိုအဖြစ်ရိုက်နှိပ်ပြီးပုံကြီးချဲ့ ဖော်ပြမှုကြောင့် စာပေစိစစ်ရေးက
နေ့စွဲ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၊
၁။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်စွဲဖြင့် ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံး၊
အချပ်ပိုများထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာရမည့်
၂။ သို့သော်လည်း ဂျာနယ်များအနေဖြင့် လိုက်နာမှုမရှိသည့်အတွက် ထပ်မံ၍
အောက်ပါအတိုင်း ဒုတိအကြိမ် သတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
(က) ရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြမည့် ဂျာနယ်၏ Logo ပုံစံနှင့်
အရွယ်အစားသည် ဂျာနယ်ထုတ်ဝေရန် ဌာနသို့ စတင်တင်ပြစဉ်က
ခွင့်ပြုပေးထားခဲ့သည့် Logo ပုံစံနှင့်
(ခ)ဂျာနယ်၏မည့်သည့်အတွင်းစာမျက်နှာတွင် မဆို ရှေ့မျက်နှာဖုံးပါ Logo
ပုံစံနှင့် အရွယ်အစားအား နောက်ထပ်အဖုံးပုံစံတစ်ခုသဖွယ် ဖော်ပြခြင်းမပြုရ။
(ဂ)ရှေ့မျက်နှာဖုံးအား အတည်ပြုပြီးပါက ထပ်မံတင်ပြခွင့်မရှိ။ သို့ရာတွင်
ဖြုတ်ပယ်ခံရပါက ၄င်းနေရာတွင် အစားထိုးရန် တစ်ကြိမ်ထပ်မံတင်ပြခွင့်ပြုမည်။
(ဃ)အချပ်ပိုတွင် ဖော်ပြမည့် Logo နှင့် ဂျာနယ် Size သည် မူုလဂျာနယ်ပါ
Logo အရွယ်အစားထက် ထက်ဝက် သေးငယ်ရမည်။
(င)အချပ်ပို(သို့မဟုတ်) Supplementary စာသားကို Logo ၏ အောက်
ဘယ်(သို့မဟုတ်) ညာတွင် ထင်ရှား ပီသစွာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြရမည်။
(စ)ဌာနက ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သော သတင်း၊ ဆောင်းပါးနှင့် ဓာတ်ပုံများကိုသာ
(ဆ) အချပ်ပို စာမျက်နှာကို A,B,C…… အက္ခရာစဉ်ဖြင့်သာ ဖော်ပြရမည်။
(ဇ)အချပ်ပို စာမျက်နှာကို အများဆုံး ၈ မျက်နှာထိသာ ခွင့်ပြုသည်။
(ဈ) ဂျာနယ်မူကြမ်းတွင် စာမျက်နှာအဖုံးတွင် ဖော်ပြရန် ခွင့်မပြုထားသော
သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓာတ်ပုံများကို အချပ်ပိုစာမျက်နှာ၏ပထမစာမျက်နှာတွင်
ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုရ။ အချပ်ပို၏ အတွင်းစာမျက်နှာတွင်သာ ဖော်ပြရမည်။
(ည) အချပ်ပိုထည့်သွင်းလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်က မည်သည့်အတွက်ကြောင့်
ထည့်သွင်းလိုခြင်းနှင့် မည်သို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြမည်ကို ဌာနသို့ ဦးစွာ
ဒေါ်စု လွတ်မြောက်သည့် သတင်းများ ဖော်ပြအပြီး ဂျာနယ် ၉ စောင် အနီကတ် ပြခံရ
9:54 PM | Posted by Unknown
ရန်ကုန်မြို့ စာအုပ်ဆိုင်တဆိုင်မှ အရောင်းသွက် ဂျာနယ်များ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ကြောက်ရွံ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံ နှင့် သတင်း အချက်အလက်များ ဖော်ပြသည့် ထိုဂျာနယ်များကို နာမည်ကျော် စာပေစိစစ်ရေးဌာနက ယခုလကုန်ပိုင်းအတွက် အနီကတ် ပြလိုက်သည်။ (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် သတင်းဓာတ်ပုံနှင့် သတင်းများအား မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြခြင်း၊ ကြိုတင် တင်ပြခြင်းမပြုဘဲ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်သည့် စာသားကို အားကစားဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးတွင် ၀ှက်၍ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း တို့အတွက် ဂျာနယ် ၉စောင်အား စာပေစိစစ်ရေးက ယာယီ ရပ်နားစေခဲ့သည်ဟု စိစစ်ရေးရုံးတွင် ကြေညာထားချက်အရ သိရသည်။
First Eleven အားကစားဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးတွင် '' Suu Free & unite advance to grab the hope " စာသားကို အနီရောင် အနုအရင့်ဖြင့် ကစားကာ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း၊ Hot News ဂျာနယ်မှာမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်သည့် သတင်းနှင့် ၁၄ ရက်နေ့ အန်အယ်ဒီရုံးရှေ့တွင် ပြောဆိုသည့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြောဆိုချက်များအား စိစစ်ရေး ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံဘဲ ဖော်ပြခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ၂ ပတ်စီ ရပ်နားခံရပြီးအခြားသော ဂျာနယ် ၇ စောင်မှာမူ တပတ်စီ ရပ်နားခံရသည်ဟု ကြေညာချက်အရ သိရသည်။ တပတ်ရပ်နားခံရသည့် ကျန် ၇ စောင်မှာ ဆဲဗင်းဒေးစ်၊ ဗီးနပ်စ်၊ မြန်မာ နယူးစ်ဝိခ်၊ လျှပ်တပြက်၊ မြန်မာပို့စ်၊ ပြည်သူ့ခေတ်နှင့် ယမန်နေ့ကမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်သည့်သတင်း ဖော်ပြခဲ့သည့် သည်ဗွိုက်စ် သတင်းဂျာနယ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
စာပေစိစစ်ရေး၏ ကြေညာချက်တွင် မည်သို့ဖော်ပြသည့် အတွက်ကြောင့် ရပ်နားသည် ဆိုသည့် ရှင်းလင်းချက်မျိုး မပါရှိသော်လည်း ဂျာနယ်တိုက်မှ ၀န်ထမ်းများ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်သည့်သတင်းကို သတင်းဂျာနယ်တိုင်း နီးပါး ဓာတ်ပုံအပြည့်၊ ခေါင်းစဉ် စာလုံးကြီးများဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ကြပြီး၊ ထိုသို့ဖော်ပြခြင်း မပြုမီ စိစစ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူထံ ဖုန်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် ပြသပြီး ခွင့်တောင်းရန် သော်လည်းကောင်း တယ်လီဖုန်းဖြင့် ခွင့်တောင်းရန် မတတ်နိုင်၍ သော်လည်းကောင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သတင်းဂျာနယ်များမှာ ဖော်ပြရန် ခွင့်ပြုသည့် သတင်းဓာတ်ပုံအစား လွတ်မြောက်ပြီး နောက်တရက် ရွှေဂုံတိုင်ရုံး လူထုအား မိန့်ခွန်းပြောသည့် သတင်းဓာတ်ပုံ၊ ရုံးခန်းအတွင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ သတင်းဓာတ်ပုံ တို့ကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည့်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်သည့် သတင်းနှင့် အတူ သူ့ဓာတ်ပုံကို သတင်းဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးတွင် တွေ့မြင်ကြရသဖြင့် စာဖတ်သူအများအပြား ၀မ်းသာအားရ ၀ယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ထွက်ရှိသည့် ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်မှာ ဒေါ်စုမျက်နှာဖုံးပုံဖြင့် ထွက်ရှိသဖြင့် ထိုနေ့ ရောင်း မလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနယူးစ်ဝိခ်ကဲ့သို့သော ဂျာနယ်များလည်း ၀ယ်သူ အထူး များပြားခဲ့သည်ဟု ဂျာနယ် အရောင်းဆိုင်များက ပြောသည်။
၂ ပတ် ရပ်နားခံရသော ဂျာနယ်များ
First Eleven အားကစားဂျာနယ်
၁ ပတ်ရပ်နားခံရသည့် ဂျာနယ်များ
လွန်ခဲ့သည့် ၇နှစ်ခွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ပတွင် ရှိစဉ်က ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာမှာ ယခုကဲ့သို့ ခေတ်မစားခဲ့ပေ။ အင်တာနက်နှင့် အီးမေးလ် စသည့် သတင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများလည်း မဖွံ့ဇြိုးသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာသည့် အခါ ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်အား အပြည့်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက မနှစ်မြို့ဟု စာပေစိစစ်ရေးနှင့် နီးစပ်သူ အမည် မဖော်လိုသည့် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဂျာနယ်များအား ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်၊ ဒေါ်စုနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ နောက်ထပ် မဖော်ပြစေရန် နအဖ အတွင်းရေးမှူုး ၁ ဖြစ်သူ သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးက အမိန့်ပေးခဲ့သည်ဆိုသည် သတင်းလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။
ရန်ကုန်မှ ဂျာနယ်ဖတ်သူ အတော်များများက ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံ အပြည့်ဖြင့် ထွက်ရှိလာသဖြင့် အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပြီး သတင်းမီဒီယာများ ရေးသားဖော်ပြခွင့် ပိုမို ရလာကြပြီလား ဆိုသည့် ကောက်ချက်ချ ပြောဆိုမှုများ ကြားနေရချိန်တွင် စာပေစိစစ်ရေးမှ ယခုလို အရေးယူမှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မကြာမီ ပေါ်ပေါက်လာတော့မည့် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် စာပေစိစစ်ရေးဌာနသည် ဒို့တာဝန်အရေး ၃ ပါး မူအတိုင်း စိစစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအများဆုံးရခဲ့သည်ဟူသော ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးဦးက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
Credit to Moemaka: မိုးမခ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်မျှဝေသည်။
Weekly Political Events Regarding the SPDC's Post Election (043-2010)
NCGUB: Situation Update of Members of Parliament in Burma Update on 1st October, 2010
Situation Update of Members of Parliament in Burma Update on 1st October, 2010
အားလုံး အမှန်ပဲဟေ့ Monday, 08 November 2010 18:01 ကာတွန်း
တဘက်သတ် မလုပ်ပါဘူး ဟန်လေး Sunday, 07 November 2010 18:29 ကာတွန်း
3:04 PM | Posted by Unknown
ဟန်လေး Sunday, 07 November 2010 18:29 ကာတွန်း
ကြာသပတေးနေ့က ရိုက်တာ သတင်းဌာနက တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာမှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖော်ဆောင်ရအောင် စစ်အစိုးရကို စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒနဲ့ မိမိ ရည်ရွယ်ချက်ကို အားအပါဆုံး ရုပ်လုံးဖော် ပြသတာပဲလို့ သတင်းဌာနက ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မလုပ်ဘူးလို့ ချမှတ်ထားတာ မရှိသေးဘူးလို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးရမယ်၊ ချောမွေ့တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ ဘယ်လို ထိရောက်ပြီး ဘယ်အဆင့်တွေရှိမယ် ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးရပါမယ်၊ စစ်တပ် မလိုတော့ဘူးလို့ မပြောပါဘူး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ဖို့ ဆိုတာထက် အလုပ်က အလွန်များနေပြီး သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ နယ်တွေကို ထပ်သွားဖို့ စီစဉ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုပါတယ်။
စစ်တပ်က နှစ် ၅၀ နီးပါး တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ တပ်မတော်သစ်ကို သူ မြင်တွေ့လိုတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဏာရ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေး စားပွဲဝိုင်းကို ခေါ်ဆောင်ဖို့ သူ့မှာ အကူအညီ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ က အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူဦးရေ သန်း ၅၀ ရဲ့ သုံးပုံတပုံဟာ ဆင်းရဲတွင်း နက်နေကြချိန်မှာ စစ်အစိုးရကတော့ ချမ်းချမ်းသာသာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နေထိုင်နေရတဲ့အကြောင်း ပြောပြီး အဲဒီ ထိပ်တန်း ပြဿနာတွေဟာ အာဏာရသူတွေနဲ့ အလျဉ်းသင့် နီးစပ်သူတွေကို မျက်နှာသာ ပေးမှုကြောင့်လို့ အပြစ်တင်ပါတယ်။ ဒီလို အာဏာရှိသူတွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေသာ ကောင်းစားရေးဝါဒဟာ တနေ့တခြား ပိုပြီး အားကောင်း လာနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွေကို လေ့လာမယ့် ကော်မတီ ဖွဲ့ပြီး လာမယ့် သီတင်းပတ်တွေအတွင်း အစီရင်ခံစာ တစောင် ထုတ်ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
Credit to RFA: http://www.rfa.org/burmese/news/assk_sees_army_role_in_democratic_burma-11202010094312.html
(ဓာတ်ပုံ - နို ၂၀၊ ၂၀၁၀၊ ရန်ကုန်၊ ဒေါ်စုအိမ်၊ သုံးရောင်ခြယ်လူငယ်များ (သုံးရောင်ခြယ်))
3:23 AM | Posted by Unknown
ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းထောက် ပေးပို့သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦး လည်းဖြစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) ရဲ့ အ တွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင်ဟာ ဂီရီမုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ ရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လှည့်လည်ပြီး လေဘေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ထိန်းသိမ်းခံဘ၀က လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ဂီရိလေမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် မြေပုံမြို့အပါအ၀င် အဓိက ရွာပေါင်း (၁၃၉) ရွာ ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ ရွာတိုင်းလိုလို ပျက်စီးခဲ့ပါ တယ်။ ရွာတွေမှာရှိတဲ့ အိမ်တိုင်းပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ တချို့အိမ်တွေ ဆို အိမ်တိုင်တွေတောင် မရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ အဓိက (၁၀) ရွာ လောက်ကို ဦးအေးသာအောင်က ကားတို့၊ စက်လှေတို့နဲ့ သွားရောက်ကူညီအားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“မြေပုံမြို့ပေါ်မှာလည်း တိုက်တွေလောက်ပဲ အကောင်းကျန်တယ်။ တိုက်ခေါင်မိုးတွေတောင် အမိုးတွေ လန် ကုန်တယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေသူ ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးအေးသာ အောင်က ပြောပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် NGO တွေရော၊ WFP (World Food Programme) စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက အကူအညီပေးပေမယ့် မမျှမတ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကူအညီတွေ အများကြီး လို အပ်နေသေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဦးအေးသာအောင်က “အန်ကယ်တို့ ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဆန်အိတ် (၁၀၀)၊ တာလဘတ်စ (၁၆၀)၊ သွပ်ပြား (၁၂၀၀) ချပ်နဲ့ ကျေးရွာငါးရွာအတွက် ရေကန်တွေပြန်လည်တူးဖော်ဖို့ ငွေ ကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ သွပ်ပြားတွေကိုတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းတွေကို အဓိကထားပြီး လှူ ဒါန်းခဲ့တယ်။ အန်ကယ် ရောက်နေတာ (၁၀) ရက်လောက်ရှိပြီ။ ကျေးရွာက လူတွေ မြို့တက်ပြီး အကူအညီ တောင်းကြတယ်။ အန်ကယ့်ဆီကိုလည်း အကူအညီလာတောင်းကြတယ်။ အန်ကယ်တို့ဘက်က သူတို့လို အပ်သလောက် အကူအညီမပေးနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
အဓိက က လယ်သမားတွေမှာ လယ်တွေ၊ တာတမံတွေ ပျက်စီးသွားတယ်။ ဒါတွေကို တကယ့်အင်အားကြီး တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက တည်ဆောက်ပေးမှသာ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေနိုင်မယ်။ ပြီးတော့ တံငါသည်တွေက စက်လှေထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ ငါးဖမ်းပိုက်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်ကြတယ်။ ဂီရိဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသူတွေအတွက် အကူအညီများစွာ လိုအပ်နေကြောင်း ဦးအေးသာအောင်က ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
Credit to Dr Lun Swe's Blog: http://drlunswe.blogspot.com/2010/11/blog-post_20.html
ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံခေါ်ယူရေး တာဝန်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံရယူ
Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12906
“အပြောင်းအလဲလိုချင်ရင် အပြောင်းအလဲရအောင် ကြိုးစား … တဲ့” (ကာတွန်း ဘီရုမာ - မိုးမခ၀က်ဘ်ဆိုက်)
3:01 AM | Posted by Unknown